Wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho
Ardaan Yare 21 March 2021 22 March 2021
Faah faahino kala duwan ayaa waxaa laga helayaa fal toogasho ah oo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gudaha magaalada Muqidisho ee Caasimadda dalka.
Ilo dadka deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in askari ka tirsan Ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa qaada Canshuuraha ee loo yaqaano Minashiibiyada lagu dilay qeybo ka mid ah degmada Dharkenley ee gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya in dilka oo ay fuliyeen rag ku hubeysnaa bistoolado uu ka dhacay gudaha Suuq Boocle oo ku yaalla degmadaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in raggii ka dambeeyey dhacdadaasi ay goobta isaga baxsadeen, kadib toogashada.
Ciidamada ammaanka dowladda Federaalka ayaa sidoo kale gaaray goobta, kuwaas oo daqiiqado kadib meydka kasoo qaaday halkaasi, kadiba sameeyey baaritaano kooban.
Ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda oo ku aadan dhacdadaasi. Si kastaba dilkan ayaa qeyb ka noqonayo falal ammaan dari oo maalmihii dambe ka dhacayey Muqdisho, kuwaas oo isugu jiro dilal & qaraxyo geystay khasaare kala duwan.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulan gaar ah la yeeshay James Swan
Latilayaha amniga Qaranka Mudane Cabdisaciid oo go’aan lagu gooray in la siiyo kursi kamid ah Golaha Shacabka